Coronavirus သတင်း - MATUPI TIMES OLTHANG
၁/ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှမြန်မာပည်၊ချင်းပြည်နယ် တီးတိန်မြို့နယ်သို့အလည်အပတ်ရောက်ရှိလာသော ချင်းအမျိုးသား တစ်ဦးထံမှ coronavirus positve ဖြစ်ကြောင်း မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့တွင် သက်ဆိုင်ရာမှတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါသည်
၂/ ၎င်းထုတ်ပြန်ချက်နှင့်မရှေးမနှောင်း၌ပင်လူနာအခြေအနေသက်သာပြီဖြစ်ကြောင်းသက်ဆိုင်ရာမှသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်၃/ လူနာသက်သာသော်လည်းကူးစက်ခံသောသူများ၊ ရောဂါကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာဒေသအလိုက်စီမံချက်စနစ်တကျဆောင်ရွက်ရန်အထူးလိုအပ်ပါသည်
၄/စီမံချက်ဆိုရာ နိုင်ငံတော်အဆင့်၊ ပြည်နယ်၊ခရ်ုင်၊ မြိုနယ်၊ ကျေးရွာ/ရပ်ကွက်၊ မိသားစု၊ တစ်ကိုယ်တော် စသည်ဖြင့်သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၊ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ဘာသာရေးအဖွဲ့ပစည်းများပူးပေါင်းကာ ရောဂါကာကြိုတင်ငာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းကိုအမျိုးသားအရေးတစ်ရပ်အဖြစ် အလေးပေးဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်
၅/ရောဂါကူးစက်မှုအပေါ်မူတည်ပြီးအဆင့်သတ်မှတ်ရမည် Level 1.23.4စသည်ဖြင့်သတ်မှတ်ကာ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်ကိစ္စရပ်များကိုထုတ်ပြန်ကြေညာရမည်၆/အချို့သောမြို့နယ်များတွင် ယင်းကိစ္စရပ်များကို အခွင့်အကောင်းယူကာကုန်ဈေးနှုန်းမြင့်အောင်သမင်တက်လုပ်နေသောသူ စီးပွားနေပါကလည်းအရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများကထိထိရောက်ရောက်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးရန်အထူးလိုအပ်ပါသည် အစိုးရချည်းကိုဘဲအားကိုးလို့မရပါ
၇/ ချင်းပြည်နယ်တွင်ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းများသည် ယုံကြည်အားက်ုးထိုက်သောအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါ၍ အဖွဲ့များနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်၈/အခူးသဖြင့်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း၏လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ လုံခြုံစွာနေထိုင်သွားလာစားသောက်ရန်အထူးလိုအပ်ပါသည်
၉/အကယ်၍မလုပ်မဖြစ်ကိစ္စကြောင့်အပြင်ထွက်ပါကအိမ်ပ့န်ရောက်ရင်ရေချိုးခန်းသို့တန်းသွား၍သန့်ရှင်းခြင်းအရင်လုပ်ပါ အဝတ်အစား ဖိနပ် လက်က်ုင်ဖုံးသန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ လက်သန့်ရှင်းရန်ဓာတုဆေးသုံးတာနဲ့အစာမစားရပါ ၊ လက်ပြန်ဆေးပြီးမှအစာစားပါ၊ ထိုသို့မဟုတ်ပါက အူမကင်ဆာဖြစ်နိုင်ပါကြောင်းသတိပေးချက်များထုတ်ပြန်ထားသည်၁၀/ရောဂါကြိုတင်ကာကွယ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ အပြင်မထွက်ပါနှင့် မိမိအိမ်၌သာနေပါ၊ stay at home is the best safety way to secure the coronavirus affected. credit: salai Naing Haikawn
Be the first to comment on "Coronavirus သတင်း"